पर्वतमा पहिराेले पुरिएर ५ जनाको मृ’त्यु, ३ बे’पत्ता ! – Nepal Online Khabar
भाद्र १८, २०७८ शुक्रबार 256
काठमाडौं : यहाँका विभिन्न ठाउँमा पहिराले पुरिँदा ५ जनाको मृ’त्यु भएको छ भने ३ जना पुरिएर बे’पत्ता भएका छन् । गएरातिको भीषण वर्षापछि पहिरो जाँदा कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङमा पाँच जना पुरिएकामा दुई मृ’तावस्थामा फेला परेका छन् ।
पहिरामा पुरिएका एकै घरका पाँच जनामध्ये १५ वर्षीया विमला पौडेल र ११ वर्षीया विनिता पौडेलको श’व निकालिएको छ । घरका तीन बे’पत्ता रहेको हुनाले खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै कुश्मा नगरपालिका–११ पकुवामा पहिरामा पुरिएका ३५ वर्षीया दुर्गा पौडेल र उनका छ वर्षीय छोरा गणेशको श’व फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
Prevको’रोना स’ङ्क्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका बालबालिकामा देखिन सक्छ ज’टिल रोग !
Nextस’र्वोच्चले सभामुख र निर्वाचन आयोगवि’रुद्धको रिटमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै !